सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघमा निर्वाचनको चटारो, १७ पदका लागि ४२ को उम्मेदवार | Sindhu Jwala
चैत ६, बाह्रबिसे सिन्धुपाल्चोक) । यतिबेला सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ सिन्धुपाल्चोकलाई १० औं अधिवेशन सक्ने चटारो परेको छ ।
संघको २५ औं साधारणसभा तथा १० औं अधिवेशन शनिबार सम्पन्न हुँदैछ । अध्यक्षमा होमबहादुर बस्नेत निर्विरोध चयन भएपनि बाँकी १७ पधाधिकारी र सदस्यको लागि भने निर्वाचन हुने सम्भावना देखिएको छ । कार्यसमितिमा चाहिने १७ सदस्यको लागि ४२ जनाको उम्मेदवारी दरखास्त परेको सिन्धुपाल्चोक उद्योगवाणिज्य संघका अध्यक्ष बेदबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । अध्यक्षको लागि सर्वसहमत भएजस्तै १७ सदस्यको लागि पनि सर्वसहमत गराउने प्रयत्न गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामी सकेसम्म सर्वसहमतद्वारा नै निर्वाचित गर्नेछौं’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार शुक्रबार उम्मेदवारी फिर्ताको समय रहेको छ । शुक्रबार बेलुका सम्म सर्वसहमत गराईने उनले बताए । त्यसो हुन नसके ७ गते मतदान हुने उनले बताए । पदाधिकारीको चयन भने १७ जना सदस्य निर्वाचित भईसकेपछि मात्र हुने उनले बताए । उनका अनुसार विधानमा उल्लेख भएअनुसार पदाधिकारीमा अध्यक्ष, वरिष्ट, प्रथम र द्वितीय उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सहितको व्यवस्था रहेको छ ।
अध्यक्ष सर्वसहमत चयन भएसंगै उम्मेदवारी दरखास्त दिने प्राय नयाँ अनुहारका उद्योगी व्यवसायी बढी रहेका छन् ।
शनिबार हुने अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको उद्योगवाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगवाणिज्य संघले चैत्र ३ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार ३ गते नामवली प्रकाशन र नामवली दावी विरोध, ४ गते अन्तिम नामवली प्रकाशन रहेको थियो । सोही दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामवली प्रकाशन भएको थियो । त्यस्तै ५ गते उम्मेदवारको दावी विरोधमा उजुरी दिने र सोही दिन उम्मेदवारको दोस्रो नामवली प्रकाशन तथा उम्मेदवारी फिर्ताको समय, ६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नाम प्रकाशन र ७ गते मतदान रहेको छ । मतदान समाप्त भएपछि लगत्तै मतगणना थालिने निर्वाचन समितिको योजना रहेको छ ।
स्मरण रहोस उद्योगी, व्यवसायीहरुको छाता संगठन सिन्धुपाल्चोक उद्योग बाणिज्य संघको २५ औं साधारण सभामा संघमा २ हजार ३२ सदस्य रहेका छन् । अधिवेशन संघको आफ्नै भवन बाह्रबिसे स्थित खोर्सानीबारीमा हुन लागेको हो ।
This entry was posted in समाचार, अर्थ. Bookmark the permalink.
सेतीदेवीको ६० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमा शिक्षक÷विद्यार्थी पुरस्कृत, सेतीदेवी कल्याणकारी कोष स्थपना (फोटोफिचर सहित)